Global Voices teny Malagasy » Mampitandrina i Shina: “Tsy Ambonin’ny Lalàna ny Aterineto” · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 28 Desambra 2012 1:59 GMT 1	 · Mpanoratra Abby Liu Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Azia Atsinanana, Shina, Fahalalahàna miteny, Hafanàm-po nomerika, Media sy Fanoratan-gazety, Mediam-bahoaka
Ny 18 Desambra 2012, namoaka lahatsoratra eo amin'ny pejy voalohany mitondra ny lohateny hoe “Tsy ambonin'ny lalàna ny Aterinet o” ny gazety mpanohana ny governemanta Shinoa People's Daily  [gazety mivoaka isan'androm-bahoaka] . Hoy ny lahatsoratra :
Ny aterineto dia sady fitaovan'ny honohono sy ny fandisoam-baovao no sehatry ny fifampizaram-baovao, ary tokony ho tompon'andraikitra amin'ny fankatoavan-dalàna ivelany sy anatin'ny serasera ny tsirairay
Vetivety dia naelin'ny televizionam-panjakana Shinoa CCTV io tsangan'asa io. Ny andro manaraka dia mbola nohitrikitrihan'ny People's Daily tamin'ny tsangan'asa hafa  [zh] ny heviny : “Ny fanaraha-maso ny aterineto mifanaraka amin'ny fanao iraisampirenena.”
Screen grab from CCTV news broadcast.
Hitan'ny mpiserasera Shinoa ho fampitandremana ireo lahatsoratra roa ireo. Mahatsiaro ho diso fanantenana noho ny fampitandremana ny ankamaroan'ny mpiserasera ary manahy fa ho bebe kokoa ny sivana rahatrizay. Maro ireo manindrotsindrona ny governemanta tamin'ireo lahatsoratra ireo. Eto ambany eto ny sasany amin'ireo fanehoan-kevitry ny bilaogera ao amin'ny Weibo, Twitter Shinoa, sy mpilaza ny heviny fanta-daza.
韩志国 : Nifarana hatreo ny volan-tantely, Notondroin'ny People's Daily mivantana tao amin'ny Weibo ny ady amin'ny kolikoly. Ao anivon'ny fanantenana sy horakora-pifaliana no ahenoana hakevohana. Azo jerena amin'ny alalan'ny lalàna ny feo isan-karazany ao amin'ny famahanam-bilaogy bitika fa tsy voatery jerena amin'ny fomba mahazatra. Na dia eo aza ny tatitra nataon'ny Akademia Shinoan'ny Siansa Sosialy  fa ny sehatry ny famahanam-bilaogy fohy no itokisana kokoa noho ny vaovaon'ny CCTV, dia voafefifefy ny fivelarana sy ny kianjan'ny famahanam-bilaogy fohy, noho izany aza dia manantena be loatra aminy.
大兵看世界 ：Izao ve no fiandohan'ny fihavaozana, sa tonga any amin'ny farany sahady? Raha angonintsika ny fanantenantsika, ilaina ny ieritreretantsika ny fahadisoam-panantenantsika ary antenao tsy ho tonga haingana loatra ny fahadisoam-panantenana. Tsy ivelan'ny lalàna ny Weibo is not outside the law, saingy manantena aho fa tsy ho lasa fihiram-piderana io! Herin-tsosialy vaovao izay nametrahana fanantenana be loatra ny aterineto. Ho raraka avokoa ireo fanantenana rehetra ireo. Manan-javatra hafa antenaina ve isika?
李庆松 ：Inona ny hafatra avoakany? Andrimaso, fanaraha-maso na sivana. [Ny aterineto] no sehatra farany ahafahan'ny olo-tsotra mandray anjara amin'ny andrimaso sosialy. Horaràn'ny governemanta tsy misy antra ve? Demokrasia? Ahoana ny fomba iresahantsika demokrasia amin'ity fiaraha-monina ity? Mampalahelo.
Aurora-trying_to_balance : Ahoana ny fomba iresahantsika fahalalaham-pitenenana? ! Nivoaka taorian'ny trangam-panenjehana kolikoly vitsivitsy an-tserasera ny lahatsoratra. Nisy olona vitsy nilaza ny marina, fa niezaka ny handrindra [hanivana] izany avy hatrany ny Sina! Sarotra ho an'ny vahoaka Shinoa ny hahazo ny tena dikan'izany fahalalaham-pitenenana izao ao anatin'izao fanaraha-maso henjana ny vaovao sy ny fitaovam-pampielezam-baovao izao.
Setriny ho an'ny Governemanta
许小年 :[Raha manaraka ny fanao iraisampirenena], ahoana ny fanaon'ny Facebook sy Twitter?[Voasakana any Shina ny Facebook sy ny Twitter]
赵楚 ：Eny, amin'ny fankatovana ny tany tan-dalàna, tsy misy toerana ambonin'ny lalàna. Saingy hiteny ny CCTV sy ny People's Daily aho eto: ny biraom-panjakana, sy ireo toerana maro an'ny manampahefana tazonina ho tsiambaratelo, ary ianareo roa tonta, fampielezam-baovaon'ny fanjakana, [koa] tsy tokony ho ambonin'ny lalàna.
贺江兵 :Raha ny fanaraha-maso ny vahoaka, mampihatra ny lasitra iraisampirenena ry zareo; fa raha resaka fihetsika tsy mendrika sy fananan'ny manampahefana Shinoa dia lazainy fa mampiavaka ny Shinoa. Amin'izao fisiana lasitra roa samihafa izao, ahoana moa no ahazoan'ny gazety tantanin'ny fanjakana ny fitokisam-bahoaka? Hamoaka lahatsoratra roa hafa indray ve ianareo: “Mifanaraka amin'ny fanao iraisampirenena ny famoahana imasom-bahoaka ny haren'ny manampahefana” sy ny “Tsy ambonin'ny lalàna ny tany anjakan'ny sampan-draharaham-panjakana”?
Fomba hafa fandikana azy:
琢磨先生 ：Nasongadin'ny vaovaon'ny CCTV sy ny People's Daily fa tsy ambonin'ny lalàna ny aterineto, izay fampitandremana ny mpijery bilaogy fohy sy ny mpampihatra sivana: manana fahalalaham-pitenenanana ny olom-pirenena, miangavy tsy hamafa lahatsoratra, na tànana ho tompon'andraikitra ianareo.
Na dia fantatry ny mpiserasera tsara aza fa fanapahan-kevitry ny governemanta ny fanivanana ny bilaogy fohy, dia tohanan-dry zareo ny fomba fandraisana maneso, manoratra ny mpiserasera iray:
火星人草帽仔 :Mampihomehy ny fahazoana azy. Mahita fahasambarana ao anaty fifanoheran-kevitra.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2012/12/28/43505/
 Tsy ambonin'ny lalàna ny Aterinet: http://cmp.hku.hk/2012/12/18/29787
 People's Daily: http://en.wikipedia.org/wiki/People%27s_Daily
 tsangan'asa hafa: http://it.people.com.cn/n/2012/1219/c1009-19939250.html
 Akademia Shinoan'ny Siansa Sosialy: http://en.wikipedia.org/wiki/Chinese_Academy_of_Social_Sciences
 赵楚 : http://www.weibo.com/2505914071/zarUdqBGa